Dropbox na-agba ndị ọrụ nke ọrụ nchekwa ya ume ịgbanwe okwuntughe ha | Akụkọ akụrụngwa
Dropbox na-agba ndị ọrụ nke ọrụ nchekwa ya ume ka ha gbanwee paswọọdụ ha
Ọrụ nchekwa, maka afọ ole na ole, aghọwo nhọrọ kachasị maka ịchekwa akwụkwọ, foto, vidiyo ma ọ bụ faịlụ ọ bụla ọzọ anyị kwesịrị ịnwe mgbe niile. Ọzọkwa ekele maka ngwa mkpanaaka, anyị nwere ike ịnweta ha, ọbụnakwa dabere na ọrụ dezie ya ozugbo na igwe ojii.
Mgbe nnukwu ụlọ ọrụ malitere ileba anya na ụdị ọrụ ndị a, Google malitere Google Drive na Microsoft SkyDrive, nke ọ gbanwere aha ya na OneDrive, ndị ọrụ Dropbox malitere ịhụ ọrụ nchekwa ndị ọzọ ma ọ bụha weputara ohere ka ukwuu karịa 2 mwute GB nke Dropbox na-enye anyị mgbe niile dị ka mmalite, oghere anyị nwere ike ịgbasa site na ịrụ ọrụ nkwado dị iche iche na netwọkụ mmekọrịta.
Afọ anọ gara aga, ọrụ nchekwa Dropbox nwere nsogbu siri ike na izu ohi nke akaụntụ na okwuntughe ha nke ọtụtụ akụkọ banyere ọrụ ahụ, nke mere ka ndị ọrụ jiri ngwa ngwa gbanwee okwuntughe iji nweta ọrụ a. Mana ọ bụghị ndị ọrụ niile metụtara nsogbu nchekwa a ka ha ghara ịgbanwe paswọọdụ ha n'oge ahụ.
Dropbox na-enweghị usoro na-ezigara ndị ahịa gị email na-echetara ha na ha kwesịrị ịgbanwe okwuntughe ha. O doro anya na ọrụ nchekwa ahụ na-akpọtụrụ ndị ọrụ niile mepụtara akaụntụ na July 2012, akaụntụ nke anatabeghị mmelite paswọọdụ ọ bụla kemgbe ahụ. O doro anya na ọ bụ usoro mgbochi ebe ọ bụ na arụghị ọrụ ahụ n'oge ọ bụla.
Ihe mbu anyi gha elebara anya iji jikwa okwuntughe anyi abughi iji nke ndi ozo dika 123456789, okwuntughe, okwuntughe, ubochi ncheta oha mmadu, aha anu ulo anyi ... Nke abuo, anyi aghaghi itinye okwuntughe anyi aghaghi iji mee ihe na-agbanwe ha mgbe niile. Usoro mmemme okwuntughe dika 1Password maka iOS na Mac Ha na-ahapụ anyị ka anyị mepụta okwuntughe maka ọrụ weebụ ọ bụla, paswọọdụ echekwara yana web yana aha njirimara nke ngwa nke n’aka nke a na-echebe site a nna ukwu paswọọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Dropbox na-agba ndị ọrụ nke ọrụ nchekwa ya ume ka ha gbanwee paswọọdụ ha
Ndị a bụ egwuregwu vidio kachasị mma n'oge niile, dị ka TIME